မြောက်ကိုရီးယားဥသျှောင်အဖြစ် ညီမဖြစ်သူ က အာဏာလုမှာ ကို ကင်ဂျုံအန် စိုးရိမ်နေရပြီ လား – Zartiman
မြောက်ကိုရီးယားဥသျှောင်အဖြစ် ညီမဖြစ်သူ က အာဏာလုမှာ ကို ကင်ဂျုံအန် စိုးရိမ်နေရပြီ လား
Zar Ti Man | July 19, 2020 | International News | No Comments
ပေါ်လစ်ဗြူရိုအဖွဲ့မှာ ညီမဖြစ်သူက ရာထူးကြီးရယူလာနိုင်ခဲ့ခြင်းက နောင်တစ်ချိန်မှာ ကင်ရဲ့နေရာကို ဆက်ခံမယ့်သူဟာ တခြားဆွေမျိုး သားချင်းမဟုတ်ဘဲ သူမသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း အသိမှတ်ပြုလိုက်သလိုပါ။ ကင်ဟာ သူမွေးတဲ့မျောက်က ပြန်ခြောက်တာကို ခံနေရပြီလို့ အနောက်သတင်းစာတွေ က ဆိုပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားအရေး ကျွမ်းကျင်သူ Roy Calley က သူ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။Roy ဟာ မြောက်ကိုရီးယားကို အချိန်တော်တော်ကြာအောင် လည်ပတ်ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ Look With Your Eyes and Tell the World စာအုပ်ကိုလည်း ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ ကင်ယိုဂျောင်ရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ အရွေ့လှုပ် ရှားမှုဟာ ကင်အတွက်တော့ မျက်ခုံးလှုပ်စရာကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ Express သတင်းဌာနကို ပြောခဲ့ပါတယ်။Roy က ” ကျွန်တော့်အ မြင်အရတော့ ကင်ယိုဂျောင် ရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ အာဏာအရှိန်ဟာ ကင်အတွက်တော့ မျက်ခုံးလှုပ်စရာ ဖြစ်လာပါပြီ … ပြုံးယမ်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ခက်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ကင်ယိုဂျောင်အနေနဲ့ သူ့အစ်ကိုရဲ့နေရာဆီကို။
တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီဆိုတာ သေချာပါတယ် … “လို့ ပြောပါတယ်။ သူက ဆက်လက်ပြီး “ကင်ယိုဂျောင်ရဲ့ လက်ရှိရပ်တည်မှုက အ တော်လေးကို ခက်ခဲမှာပါ … သို့သော်လည်း သူမဟာ အလွန်ခေါင်းမာပြီး ထက်မြတ်သူဖြစ်တဲ့အလျှောက် သမ္မတထရမ့်နဲ့ ပျူငှာတဲ့ဆက် ဆံရေးတော့ မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး …. “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကင်ယိုဂျောင်ကို တောင်ကိုရီးယားက နယ်စပ်ဆက်ဆံရေးရုံးကို ဖောက်ခွဲဖျက် ဆီးမှုအတွက် အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မြောက် ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန် ဟာ အခုအခါမှာ ညီမဖြစ်သူက အာဏာပြန်လုမှာကို စိုးရိမ်နေရပြီလို့ သတင်းတွေက ဖော် ပြနေပါတယ်။ သတင်းတွေအရ ကင်ဟာ ကျန်းမာရေးကြောင့် နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေကနေ လပိုင်းတော်တော်ကြာအောင် နားထားရချိန်မှာ၊ ညီမဖြစ်သူ ကင်ယိုဂျောင်က အာဏာနယ်ချဲ့မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ကင်ယိုဂျောင်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအရေးပါဆုံး အမျိုးသ မီးဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ စစ်တပ်ကိုတောင်မှ အမိန့်ပေးစေခိုင်းနိုင်တဲ့ သြဇာအာဏာတွေ သက်ရောက် လာခဲ့ပါတယ်။
တကယ်က ဒီအာဏာကို ကင်ဂျုံအန်ကိုယ်တိုင်က ချီးမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ညီမဖြစ်သူကို လပိုင်းအတွင်းမှာ ပါတီရဲ့ထိပ်သီးပိုင်း ပေါ်လစ်ဗြူ ရိုအဖွဲ့ထဲကို ထည့်ပေးခဲ့သလို၊ နိုင်ငံအဆင့်အခမ်းအနားတွေကို သူ့ကိုယ်စား ညီမဖြစ်သူ ကို တက်ခိုင်းခဲ့တာပါ။
ပျေါလဈဗွူရိုအဖှဲ့မှာ ညီမဖွဈသူက ရာထူးကွီးရယူလာနိုငျခဲ့ခွငျးက နောငျတဈခြိနျမှာ ကငျရဲ့နရောကို ဆကျခံမယျ့သူဟာ တခွားဆှမြေိုး သားခငျြးမဟုတျဘဲ သူမသာလြှငျဖွဈကွောငျး အသိမှတျပွုလိုကျသလိုပါ။ ကငျဟာ သူမှေးတဲ့မြောကျက ပွနျခွောကျတာကို ခံနရေပွီလို့ အနောကျသတငျးစာတှေ က ဆိုပါတယျ။ မွောကျကိုရီးယားအရေး ကြှမျးကငျြသူ Roy Calley က သူ့အမွငျကို ပွောပါတယျ။Roy ဟာ မွောကျကိုရီးယားကို အခြိနျတျောတျောကွာအောငျ လညျပတျဖူးသူဖွဈပါတယျ။
သူဟာ Look With Your Eyes and Tell the World စာအုပျကိုလညျး ရေးသားခဲ့သူဖွဈပွီး၊ ကငျယိုဂြောငျရဲ့ မွနျဆနျတဲ့ အရှလှေု့ပျ ရှားမှုဟာ ကငျအတှကျတော့ မကျြခုံးလှုပျစရာကောငျးလာလိမျ့မယျလို့ Express သတငျးဌာနကို ပွောခဲ့ပါတယျ။Roy က ” ကြှနျတေျာ့အ မွငျအရတော့ ကငျယိုဂြောငျ ရဲ့ မွနျဆနျတဲ့ အာဏာအရှိနျဟာ ကငျအတှကျတော့ မကျြခုံးလှုပျစရာ ဖွဈလာပါပွီ … ပွုံးယမျးမှာ ဘာတှေ ဖွဈနတေယျဆိုတာ ပွောဖို့ခကျပါတယျ … ဒါပမေယျ့ သခြောတာကတော့ ကငျယိုဂြောငျအနနေဲ့ သူ့အဈကိုရဲ့နရောဆီကို။
တဖွညျးဖွညျးနီးကပျလာပွီဆိုတာ သခြောပါတယျ … “လို့ ပွောပါတယျ။ သူက ဆကျလကျပွီး “ကငျယိုဂြောငျရဲ့ လကျရှိရပျတညျမှုက အ တျောလေးကို ခကျခဲမှာပါ … သို့သျောလညျး သူမဟာ အလှနျခေါငျးမာပွီး ထကျမွတျသူဖွဈတဲ့အလြှောကျ သမ်မတထရမျ့နဲ့ ပြူငှာတဲ့ဆကျ ဆံရေးတော့ မွငျရမှာမဟုတျပါဘူး …. “လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ကငျယိုဂြောငျကို တောငျကိုရီးယားက နယျစပျဆကျဆံရေးရုံးကို ဖောကျခှဲဖကျြ ဆီးမှုအတှကျ အမှုဖှငျ့ထားတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
မွောကျ ကိုရီးယားခေါငျးဆောငျ ကငျဂြုံအနျ ဟာ အခုအခါမှာ ညီမဖွဈသူက အာဏာပွနျလုမှာကို စိုးရိမျနရေပွီလို့ သတငျးတှကေ ဖျော ပွနပေါတယျ။ သတငျးတှအေရ ကငျဟာ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ နိုငျငံရေးအလုပျတှကေနေ လပိုငျးတျောတျောကွာအောငျ နားထားရခြိနျမှာ၊ ညီမဖွဈသူ ကငျယိုဂြောငျက အာဏာနယျခြဲ့မှုတှေ ပွုလုပျနိုငျခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။ကငျယိုဂြောငျဟာ နိုငျငံရဲ့ဒုတိယအရေးပါဆုံး အမြိုးသ မီးဖွဈလာခဲ့ပွီး၊ စဈတပျကိုတောငျမှ အမိနျ့ပေးစခေိုငျးနိုငျတဲ့ သွဇာအာဏာတှေ သကျရောကျ လာခဲ့ပါတယျ။
တကယျက ဒီအာဏာကို ကငျဂြုံအနျကိုယျတိုငျက ခြီးမွငျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး၊ ညီမဖွဈသူကို လပိုငျးအတှငျးမှာ ပါတီရဲ့ထိပျသီးပိုငျး ပျေါလဈဗွူ ရိုအဖှဲ့ထဲကို ထညျ့ပေးခဲ့သလို၊ နိုငျငံအဆငျ့အခမျးအနားတှကေို သူ့ကိုယျစား ညီမဖွဈသူ ကို တကျခိုငျးခဲ့တာပါ။
COVID-19 ကူးစက်မှု စံချိန်တင်မြင့်တက်လာသော အမေရိကန်တွင် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် နှာခေါင်းစည်း စတင်တပ်ဆင်
ကိုဗစ်ရဲ့ သားကောင် ဖြစ်ဦးမယ့် နောက်ထပ် အာရှ နိုင်ငံ တစ်ခုအကြောင်း သိပြီးကြပလား?
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အတိုးနည်း ချေးငွေထုတ်ချေးနေသဖြင့် အမေရိကန်ဒေါသထွက်